Tamarta la cusboonaysiin karo - Cusboonaysiinta Cagaaran | Cusbooneysiinta Cagaaran (Bogga 3)
Tamarta qorraxda… roob !. Qolka cusub ee qorraxda ee leh graphene
Marka la soo saaro unugga cusub ee qoraxda leh graphene waxaa suurtagal noqon doonta in tamarta qorraxda lagu helo dhibco roob. Horumar dhanka tamarta qoraxda ah.
Kaydinta hawo la cadaadiyey si loo dhaliyo koronto
Kaydinta hawo ciriiri ah si loogu isticmaalo batteriga tamarta dib loo cusboonaysiin karo marka tamartaan aan laga helin mashruuca RICAS 2020.
Layaabka tamarta Qorraxda! Waa ka ugu raqiisan
Suuqyada tamarta adduunka ayaa isbedelaya, illaa heer tamarta qoraxda ay noqoneyso habka ugu jaban ee koronto lagu helo
Iberdrola waxay koronto siin doontaa Apple labaatanka sano ee soo socota iyada oo loo sii marinayo baarkinka ku yaal Oregon, halkaas oo ay ku maalgashan doonaan 300 milyan oo doolar.
Isbedelka, hawlgalka iyo mustaqbalka beeraha dabaysha. Dhismaha marawaxadaha dabaysha. Muhiimadda tamarta dabaysha.
Dawladdu waxay ku daabacday BOE inay u fasaxayso Renovables de Sevilla SL rakibidda qorraxda sawir qaade 110MW Guillena ah. Mustaqbalka tamarta qoraxda.
80% ka yar CO2 oo leh biyofiil-biyoodka
Mashruuca LIFE + Methamorpohis wuxuu ka kooban yahay adeegsiga biyaha wasaqda ah meel kale oo laga helo tamar iyo in loo isticmaalo biofuel.
In 2017, in ka badan 60.000 MW oo ah dabaysha koronto ayaa lagu rakibi doonaa adduunka
In 2016, in ka badan 54.000 MW tamarta dabaysha ayaa lagu rakibay in ka badan 90 dal. Awoodda urursan ee adduunka ayaa kordhay 12,6% sanadkii hore, ilaa 486.000 MW
Maareynta keynta iyo tamarta biomass oo ah kheyraad waara
Sidee bay tahay in maaraynta kaynta iyo noolaha waara loo waafajiyo si looga fogaado xaalufinta adduunka. Halkan ka ogow
UK waxay joojisay isticmaalka dhuxusha si ay u dhaliso koronto 135 sano kadib
Waxay ahayd ummaddii ugu horreysay ee adeegsata dhuxul si ay u dhaliso koronto, 135 sano kadib, waa tii ugu horreysay ee ...
Tallaabooyinka lagu gaarayo ujeeddooyinka tamarta sannadka 2030-ka
Dukumiinti ku saabsan bartilmaameedyada tamarta sanadka 2030 waxaa daabacay IEA, Bangiga Adduunka ama IRENA ururada kale ee caalamiga ah.
Ma awoodi karnaa inaan joojinno duufaannada oo aan keydinno tamartooda?
Duufaanta kulaylaha iyo duufaannada, dabayshu waxay wadataa tiro badan oo tamar ah oo laga faa'iideysan karo si loo dhaliyo tamarta dabaysha.
Kaliya 3% tamarta jasiiradaha Balearic waa la cusboonaysiin karaa
The Greens / Isbahaysiga Xorta ah ee Yurub (Greens / Ale) iyo MÉS per Mallorca waxay muujinayaan xanuun daran sababtoo ah jasiiradaha Balearic «kaliya 3…
Dooxada Silicon, oo laga helo tamarta dabaysha badda ka socota saddex waddan oo Yurub ah
Dooxada 'Silicon Valley' ee tamarta dabaysha dhulka ka baxsan waxay noqon doontaa mashruuca Power Link Islands oo ku yaal Bangiga Dogger ee ay abuureen Jarmalka, Denmark iyo Netherlands.
Abuurista tamar inta aad socoto waa suurtagal (Pavegen smart tiles)
Si dhakhso ah u raacida garoomada diyaaradaha, xarumaha ganacsiga iyo garoomada kubada cagta ayaa dhalin kara tamar isla markaana yareyn kara biilka iyadoo ay ugu wacan tahay Pavegen smart tiles
Bangiyadu waxay bilaabaan Amaah Cagaaran
Hay'adda maaliyaddu waxay hadda soo bandhigtay amaahdeeda Cagaaran, oo ah wax soo saar "loo abuuray iyada oo looga dan leeyahay fududeynta helitaanka tamarta la cusboonaysiin karo"
Dhismayaasha leh ku dhowaad eber isticmaalka tamarta
Isbaanishka waddo dheer ayaa loo marayaa si loogu hoggaansamo Amarka Yurub ee 2010/31 si dhismayaasha loogu dhiso waxtarka ugu badan ee tamarta laga bilaabo 2020
Suuqa adduunka ee tamarta dabaysha yar ayaa kori doonta 20% shan sano gudahood
Warbixin cusub oo ka soo baxday Cilmi-baarista iyo Suuqyada ayaa saadaalineysa in suuqa adduunka ee tamarta dabaysha yar uu kori doono in ka badan 20% sannadaha soo socda.
Ururka Shirkadaha Tamarta Cusboonaysiinta-APPA waxay cambaareyneysaa roobka, la'aanta heshiis iyo qorshe la'aan xaraashka la cusboonaysiin karo.
Magaaladii ugu horreysay ee qorraxda ku taal waxay ku taal Mareykanka, waxaana loogu yeeri doonaa Babcock Ranch, waa magaalo yeelan doonta warshad soolar ah, beero ay leeyihiin bulshada, iwm
Aasiya waxay u diyaar garoobeysaa inay Yurub kaga sarreyso korantada biomass
Sanadkii 2015 faraqa u dhexeeya ASIYA iyo YURUB wuxuu ka badnaa 6.000 MW sanad ka dibna wuxuu si dirqi ah ku gaaray 1.500. Evolution iyo mustaqbalka biomass
Haddii Spain aysan wax ka beddelin qawaaniinta tamarta la cusboonaysiin karo, uma hoggaansami doonto heshiiskii Paris
Spain iyada oo aan la badalin qawaaniinta la cusbooneysiin karo ma awoodi doonaan inay la kulmaan ujeedada uu dejiyay Heshiiska Paris ee sanadka 2050.
Ma mudan tahay in la iibsado baallayaasha ku shaqeeya cadceedda?
Kahor intaadan iibsan baalayaasha gacanta labaad ku shaqeeya, waa inaan falanqeynaa dhinacyada kala duwan ee ka dhigi doona maalgashigeenna mid faa'iido leh.
Koritaanka Photovoltaic ee Latin America
Laga soo bilaabo ficil ahaan inaadan ku rakibeyynin sawir-qaadis bilowga tobankan illaa saadaasha saadaalinaysa in ka badan 40 GW oo lagu rakibay dhammaadkeeda.
Hydrotor, waa hab cusub oo lagu fiiriyo tamarta hidda
Hydrotor, marawaxadaha yar yar ee awooda u leh inay ka soo saaraan sariiraha wabiga ama lifaaqyadooda si hufan. Gebi ahaanba lagu sameeyay Spain.
10 sano gudahood, dib u cusboonaysiinta ayaa noqon doonta isha ugu raqiisan tamarta
Sannadkii 2016, 9% ayaa la cusboonaysiin karaa koronto, halka 23% ka yar la maalgaliyay sanadkii ka hor iyada oo ay ugu wacan tahay hal-abuurnimada weyn ee ka jirta qaybta
6 waxyaabood oo ay tahay inaad ka ogaato awoodda dabaysha yar
Tamarta dabaysha yar ayaa xal u ah yareynta isticmaalka tamarta korantada. Waxay iskood u soo saari kartaa koronto waxayna ku badbaadin kartaa biilka korontada
Greenpeace waxay baabi'isaa khuraafaadka tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Greenpeace waxay ku doodeysaa in aduunyo leh tamar nadiif ah dhamaanteed ay macquul tahay oo la noolaan karo, waana taas sababta ay ugu heelan tahay inay kala furto khuraafaadka ugu muhiimsan qaarkood.
Xisaabinta lumens of nalalka ilaaliya tamarta
Nalalka ilaaliya tamarta waxaan u kala saaraynaa sida ay u kala iftiimsan yihiin, iyadoo loo yaqaan "lumens" oo si sax ah u tilmaamaysa xaddiga iftiinka soo baxa.
Ballanqaadka weyn ee Barcelona ee 'tamarta qorraxda'
Barcelona waxay ka shaqeysaa sidii kor loogu qaadi lahaa tamarta qorraxda, iyadoo ujeedadu tahay in la laba jibaaro dhalinta korantada degmada oo laga dhaliyo tamarta sawir qaadeyaasha ah
Dawladdu waxay yareyneysaa «khidmadaha» xaraashka xiga ee dib-u-cusboonaysiinta
Wasaaraddu waxay yareeysay mugga ugu badan ee gargaarka kuwa ku guuleysta xaraashka xiga. 11% dabaysha, iyo 22% sawir qaade
Sidaas oo kale ayaa ah taararka qorraxda ee dabooli doona guryaha mustaqbalka fog
Si ka duwan alwaaxda sawir-qaadista ee saqafyada la dul dhigo, dusiyeyaasha qorraxda ayaa ah kuwo bilic leh oo ku dhowaad la mid ah sida saxanka.
Jasiiradaha Canary waxay beddelayaan qaabkoodii tamarta: Laga soo bilaabo saliidda illaa la cusbooneysiin karo
Saddexda dhibaato ee qaabka tamarta jasiiradaha Canary (iyo xalkooda). Xiriirka ka dhexeeya jasiiradaha. Isticmaalka ugu weyn ee tamarta la cusboonaysiin karo. Batroolka
Tesla wuxuu doonayaa inuu dhiso magaalada ugu waarta adduunka
Tesla wuxuu dhisi doonaa magaalo 100% lagu bixiyo tamarta la cusboonaysiin karo, oo leh gaadiid koronto ku shaqeeya iyo wadooyin si buuxda loo lugeeyo
UNEF waxay weydiisaneysaa TS inay hakiso xaraashka xaraashka
UNEF waxay weydiisatay Maxkamadda Sare inay codsato tallaabooyin taxaddar leh oo ku saabsan joojinta xaraashka xiga ee dib-u-cusboonaysiinta. Maaddaama ay u roon tahay Tamarta Dabaysha
Shabakad kululeynta biomass oo loogu talagalay dadka deggan 6000 ayaa laga hirgelin doonaa Guadalajara
Guadalajara waxay lahaan doontaa shabakad kululeynta biomass oo siin doonta tamarta kuleylka ilaa 6.000 oo dadka deegaanka ah. Evolution iyo mustaqbalka biomass. Kaydinta tamarta.
Muddo toban sano ah Barcelona ilaa Madrid shidaal la’aan
Wright Electric waxay dejisay hadaf ah in ay ku dhisto diyaarad qorraxda 10 sano gudahood. Evolution iyo mustaqbalka gawaarida korontada. Diyaaradda Cadceedda
Degmooyinka yaryar ee Catalan waxay weydiistaan ​​dabaysha dabaysha
AMEC waxay ku baaqeysaa in la sameeyo halbeeg ku saabsan beeraha dabaysha, si loola dagaallamo xaalufka iyo gabowga magaalooyinka
Dowladdu waxay ugu yeertay xaraashka 3.000 oo megawatt la cusboonaysiin karo
Dawladdu waxay oggolaatay RD oo ku baaqaysa xaraash ilaa 3000 MW ah oo teknoolojiyadda la cusboonaysiin karo ah. Evolution iyo mustaqbalka dib loo cusbooneysiin karo ee Spain
Golaha magaalada ee BCN wuxuu abuuraa suuqleyda ugu weyn Spain
Markii hore waxay ahayd Cádiz haddana waa Barcelona. Caasimaddu waxay go'aansatay inay koronto ku bixiso ayna sameyso shirkad ganacsi oo u gaar ah Barcelona Renewable Energy
Tamarta qoraxda ayaa ku jirta moodo
Dhacdooyinka cusub ee tamarta sawir qaadista, tas-hiilaadka cusub, mustaqbalka tamarta la cusbooneysiin karo, isbeddellada cusub, carwada Intersolar ee Jarmalka.
Tamarta qoraxda iyo ilaha kale ee tamarta la cusboonaysiin karo
Faa'iidada ugu weyn ee tamarta qorraxda kaheleysa waxyaabaha kale ee dib loo cusbooneysiin karo sida tamarta dabaysha iyo tamarta haydaroolka.
Dibadbaxyada Greenpeace ayaa looga soo horjeedaa xannibaadda korontada ee dib loo cusboonaysiin karo
Dhaqdhaqaaqayaasha Greenpeace ayaa la geeyay si ay u cambaareeyaan siyaasada shirkadahaan ay xayirayaan tamarta la cusboonaysiin karo iyo wasakheynta
Horumarka isbeddelka ku keenaya tamarta la cusbooneysiin karo (Gudbinta Qolalka Solarka iyo Solar Tinta)
Horumarka tikniyoolajiyadda ayaa ka dhigay qorraxda iyo dabaysha inay sii fududaanayso in laga faa’iideysto. Fikradaha lagu hagaajinayo waxtarkaaga. Mustaqbalka soo socda
Donald Trump ayaa amar ka soo saaray cusboonaysiinta
Saamayn intee le’eg ayuu amarkan ku yeelan doonaa adeegsiga cusboonaysiinta iyo ku tiirsanaanta dhaqaalaha Mareykanka ee shidaalka shidaalka?
Jarmalka ayaa qorsheynaya inuu keeno 3,8 milyan oo guri si loo kireeyo tamarta sawir qaadeyaasha
Isbeddelka tamarta sawir qaadista iyo korontada, moodeello ganacsi oo cusub, is-adeegsi, Shirkad urursadeyaal gudaha iyo warshado ah, baytariyada Lithium-ion
Tamarta dabaysha badda ee Yurub waxay sugeysaa sannadihii ugu dambeeyay
Mustaqbalka tamarta la cusboonaysiin karo. Isbeddelka tamarta dabaysha badda iyo mustaqbalkeeda dhow. Beerta dabaysha ugu weyn adduunka
Spain waxay dib ugu furtay waaxda dib loo cusboonaysiin karo
Taariikhda dib loo cusbooneysiin karo, kororka qeybta, hoos u dhaca waaxda. Fursadaha cusub. Mustaqbalka tamarta la cusboonaysiin karo (dabaysha, qoraxda, biyaha ...)
Ku rakibida tamarta qoraxda ee ugu weyn magaalada Córdoba waxay ku jirtaa supermarket
Supermarket-ka 'Deza supermarket' ayaa ku rakibay 32,4 kW photovoltaics is-cunid, taas oo kuu oggolaan doonta inaad keydiso 15% biilka korontada.
Dareeraha ayaa la helaa si loo kaydiyo tamarta qoraxda
Koox cilmi baarayaal ah oo ka socda Chalmers ayaa muujiyay inay suurtagal tahay in tamarta qoraxda si toos ah loogu keydiyo dheecaanka kiimikada
Waxaa la abuuray unug weyn oo cadceedda ku shaqeeya
Yoshikawa waxay soo bandhigtay gudigii ugu horreeyay ee sawir-qaadis ah oo ka sarreeya 26% wax-ku-ool ah si loogu beddelo iftiinka tamarta qorraxda.
Finland waxay mamnuuci doontaa isticmaalka dhuxusha si loo soo saaro koronto kahor 2030
Dowladda Finland waxay soo bandhigtay qorshe waaxda tamarta istiraatiiji ah oo looga mamnuucayo isticmaalka dhuxusha soo-saarka korantada sanadka 2030-ka
Castilla y León waxay ku kabaysaa 3 M projects mashaariic waxtarka tamarta ee bulshada deriska ah
Kaabista Castilla y León. Waxtarka tamarta. Ka hirgelinta tamarta la cusboonaysiin karo ee magaalooyinka. Shabakad cusub oo qaboojiye ah oo ku taal Olot
Waxay soo jeedinayaan abuuritaanka harooyin macmal ah si loo dhaliyo tamar.
Shirkad Ingiriis ah ayaa soo jeedinaysa mashruuc lagu abuurayo balliyo macmal ah laguna helo tamar dib loo cusboonaysiin karo iyada oo loo marayo tamarta qulqulka.
Mustaqbalka tamarta dabaysha
Isbeddelka tamarta dabaysha, marawaxadaha dabaysha cusub. Awood u leh jardiinooyinkii hore. Jardiinooyinka ka baxsan xeebta. Noocyo cusub oo awood badan
Maalgelinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay kordhin doontaa waxsoosaarka guud ee adduunka
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay kasbataa awood badan iyo tartan badan. Maalgelinta dib-u-cusbooneysiinta ayaa naga caawin doonta inaan kor u qaadno waxsoosaarka adduunka.
Dabaylaha bada waxay muhiim u yihiin hormarinta dib u cusboonaysiinta
Tamarta dabaysha dhulka ka baxda waxay kusii jeedaa suuqyada waxayna kasameyneysaa tartan.Muxuu noqon doonaa muuqaalka tamarta dabaysha tobaneeyo sano ee soo socda?
Warshadda cusub ee Tesla ee Hawaii: 272 baytariyada hal mid
Tesla waxay ku sii socotaa qorshihii ballaarinta si ay tamar nadiif ah u siiso jasiiradaha fogfog ee Baasifigga. HyperLoop, SpaceX, Solarcity, Powerwall, Powerpack
Midowga Yurub wuxuu ka dalbanayaa Spain sharaxaad ku saabsan caqabadaha hortaagan is-isticmaalka korontada
Brussels waxay ku soo oogaysaa caqabado ay Spain ku soo rogtay koronto iskeed u isticmaasha, diidmada Muwaadiniinta iyo PP-ka is-u adeegsiga. Horumarka tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Isbaanishka, tusaale xun qaybta la cusboonaysiin karo
Isbeddelka guud ee nidaamka tamarta adduunka, isbeddelka waaxda la cusbooneysiin karo, cawaaqibta isticmaalka qalabka lafaha.
Kordhinta dib u cusbooneysiinta ayaa yareyneysa qiiqa gaaska lagu sii daayo
Isbedelka Cimilada iyo cawaaqibkeeda. Kordhinta heerkulka Spain. Waxay yareysaa sii deynta gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyadoo ay ugu wacan tahay isticmaalka hoose ee dhuxusha
28% korantada adduunka sanadka 2021 waa la cusboonaysiin karaa
Welwelka deegaanka ayaa ku soo kordhay muddooyinkan dambe dadka adduunka. Evolution tamarta la cusboonaysiin karo. Marawaxadaha dabaysha cusub
Jarmalku inuu u beddelo macdanta dhuxusha xarun weyn oo koronto laga dhaliyo
Laga bilaabo 2018, Jarmalka dib dambe ugama shaqeyn doono macdanta dhuxusha anthracite. Evolution of tamarta korontada. Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Costa Rica.
PP iyo C ee diidmada qawaaniinta is-isticmaalka korontada
Golaha Koongareesku wuxuu ansaxiyay, oo ay taageerayaan PP iyo Citizens, diidmada qayaxan ee dowladda ee is-isticmaalka korantada. Isbedelka tamarta la cusboonaysiin karo
Nasiib darro Spain waxay fadhiisatay isticmaalka tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Isbaanishku wuxuu fadhiisanayaa isticmaalka cusboonaysiinta. Abuuritaanka tamarta la cusboonaysiin karo. Cawaaqib xumada ka dhalan karta adeegsiga walxaha foosha. iibsashada xuquuqda CO2
Maraakiibta ugu horeysa ee marawaxadaha dabaysha ee Spain waxay noqon doontaa biyaha Canary
Jasiiradaha Canary waxay yeelan doonaan marawaxadaha ugu horreeya ee dabaysha Isbaanishka: Evolution Wind Energy. Tamarta dib loogu cusboonaysiin karo jasiiradaha Canary. Hirgelinta mashruuca Plocan
5-ta hindise ee qoraxda ee ugu calaamadaha badan
Waxaa jira alifaad badan oo qoraxda, qaar fudud iyo kuwo kale oo leh hami weyn oo muujisay in tamarta la cusboonaysiin karo lagu kalsoonaan karo
Maxaa ka dhici doona Yurub oo leh tamarta la cusboonaysiin karo iyo is-cunid?
E.ON waxay ku boorinaysaa adeegsadayaasheeda inay iyagu is cunaan isla markaana ay hirgalin doonaan nidaam lagu magacaabo SolarCoud oo u ogolaanaya soo saarida iyo keydinta korontada. Mustaqbalka is-cunitaanka
Cusboonaysiinta Isbaanishka waxay kusii jeedaan Latin America
Shirkadaha Isbaanishka waxay mustaqbalkooda ka helaan Latin America iyadoo tamarta la cusboonaysiin karo ay ka mid tahay kuwa adduunka laga aqoonsan yahay.
Caqabada tamarta la cusboonaysiin karo ee jasiiradaha Canary
Dowladdu waxay rajeyneysaa in qoondada cusub, muddo gaaban gudahood aan uga gudbi karno 9% dib loo cusbooneysiin karo illaa 21%.
Sidee loo xisaabiyaa tirada baalayaasha qorraxda ee aan u baahanahay?
Waxaan xisaabineynaa inta leyrarka qorraxda ee aad u baahan tahay, halyeeyada ugu muhiimsan ee tamarta qoraxda, iyo isbadalkeeda sanadaha soo socda
Elon Musk: "Haddii aanan ku xallin karin dhibaatooyinka tamarta ee Australia 100 maalmood, waxaan ku sameyn doonaa si bilaash ah"
Aasaasaha Tesla wuxuu sheegtay inuu awood u leeyahay inuu xalliyo dhibaatooyinka xagga tamarta ee Koonfurta Australia. Evolution Tesla, SpaceX, Hyperloop iyo SolarCity
Tuniisiya waxay ku maalgelinaysaa bilyan doolar dib u cusboonaysiinta
Tunisia waxay damacsan tahay inay maal gashato ilaa hal bilyan oo doolar si ay awood ugu yeelato kordhinta dhalinta tamarta iyada oo loo marayo dib u cusbooneysiinta korantada dalka.
Howlgalka Hawada si loo ogaado gubashada alwaaxda la daaweeyay
Hawlgalka Hawada, gubashada alwaaxda la daaweeyay ayaa lala socon doonaa maadaama ay khatar tahay maadooyinka sunta ah ee la sii daayay awgood
Baahida aadanaha ee tamarta la cusboonaysiin karo: Watly
Mashruucan waxaa taageeraya maalgelin ka socota mashruuca Horizon 2020 wuxuuna ku dhow yahay inuu soo bandhigo mashiinkiisii ​​ugu horreeyay ee buuxa ee Watly.
Nederland waa wadanka koowaad ee aduunka leh 100% tareenada dabaysha
Nederland waxay ku kordhisaa kacaankeeda koronto 'tareenada dabaysha'. Isbeddelku lama fileynin inuu yimaado illaa 2018. Wuxuu adeegsadaa tamarta Dabaysha
Farqiga u dhexeeya tamarta qulqulka iyo tamarta hirarka
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah tamarta qulqulaya iyo tamarta hirarka oo lagu daray faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka qaarkood
35% marawaxadaha dabaysha waxtar badan leh mahadnaq baalasha cayayaanka
Evolution iyo mustaqbalka tamarta dabaysha, abuurista marawaxadaha dabaysha waxtarka leh oo ay ugu wacan tahay barashada baalasha cayayaanka. Fiidiyowyada marawaxadaha V164
U adeegsiga dhulalka yar yar ee wax soo saarka noolaha
Isticmaalka dhulalka yar yar ee lagu beero dhirta qaarkeed oo si gaar ah loogu hibeyn doono soo saarista biomass waara ayaa la soo jeediyay.
Olot (Girona) wuxuu abuuraa shabakad ugu horeysa qaboojiyaha oo ku saleysan seddex tamar oo dib loo cusboonaysiin karo
Olot wuxuu hadda bilaabay shabakadda ugu horreysa ee la cusboonaysiin karo ee kicinta hawo qaboojinta. Isticmaalka biyo-dhuleedka, sawir-qaadista iyo biomass
Waa maxay, sidee loo soo saaraa iyo waxa loo adeegsado tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta' ayaa leh
Sidee ayaa loo soo saaraa tamarta qoraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic solar', qeybaha aan u adeegsano sidee ayey isu beddeli doontaa iyo mustaqbalkeedu muxuu noqon doonaa? Dhibaatooyin noocee ah ayuu xalliyaa?
Wadooyinka waaweyn ee leh saqafyada qoraxda
Adduunku wuxuu isku dayayaa inuu ka faa'iideysto tamarta nadiifka ah: in lagu daboolo waddooyinka, jidadka waaweyn iyo jidadka tareennada leh saqafyada cadceedda qoraxda hadda waa ikhtiyaar
Dhaqanka deegaanka Isbaanishka ayaa hooseeya
Ilaalinta deegaanka ayaa ku jirta booska seddexaad ee liiska welwelka Isbaanishka, shaqo la'aanta iyo howlgabnimada.
Marawaxadaha dabaysha ugu weyn adduunka
Vestas waxay soo bandhigtay cusbooneysiinta marawaxadaha dabaysha ugu weyn adduunka. V164, oo ah makiinad dabaysha oo dhererkeedu yahay 220m oo leh 38 tan oo gar ah iyo 80m dheer
Guryaha qorraxda, guryaha mustaqbalka
Guryaha cadceedda waxay noqon karaan noocyo kala duwan oo leh faa iidooyin sida baalayaasha qoraxda, isticmaalka biyaha oo hooseeya. Guryaha mustaqbalka waa halkan.
Beerta dabaysha ee ugu weyn adduunka
Beerta dabaysha ee ugu weyn ee xeebta ayaa ku taal Kent (England), oo ay dhisteen EON iyo DONG. Isbeddelka tamarta dabaysha badda iyo mustaqbalkeeda.
Madrid waxay martigalisay carwada tamarta la cusboonaysiin karo (GENERA)
Laga bilaabo Febraayo 28 ilaa 3 Maarso, IFEMA waxay martigelisaa carwada GENERA ee tamarta la cusboonaysiin karo. Waxaad ka heli kartaa soo jeedinta 76 shirkadood.
"Xilligii shidaalka shidaalka ayaa dhammaaday, waxaan ku jirnaa xilligii tamarta la cusboonaysiin karo"
Evolution of III Solar Forum, mustaqbalka tamarta la cusboonaysiin karo. Dareenka Wakiilka Yurub ee Waxqabadka Cimilada iyo Tamarta Miguel Arias Cañete.
Hindisaha cusub ee deegaanka ku saleysan ayaa ka caawiya tamarta la cusboonaysiin karo
Waxaa jira ikhtiraacyo badan oo cusub oo la soo saaray iyada oo lagu mahadiyay ficil ku saabsan tamarta la cusboonaysiin karo iyo xiisaha loo qabo in lagu hagaajiyo mustaqbalka.
Isbeddelka awoodda dabaysha ee Isbaanishka. Waxay ku taalaa Andévalo (Huelva), waxaan ka helnaa beerta dabaysha ugu weyn Spain (292 MW), oo ay leedahay Iberdrola Renovables
Isniinta, Febraayo 6, Isbaanishku waxay soo saartay tamar dabaysha oo ka badan waddamada kale ee Yurub
Isbaanishku wuxuu soo saaray tamarta dabaysha Isniintaan marka loo eego waddamada kale ee Yurub, sharaxaadda barnaamijka DailyWind, soosaarka tamarta dabaysha ee Yurub.
Hal kiilomitir waddo dheer oo solar ah Normandy
Mashruuca Wattway, waa waddadii ugu horreysay ee laga hirgeliyo qorraxda oo laga hirgeliyo dalka Faransiiska, faa iidooyinkeeda iyo khasaaraheeda kadib markii ay ku baxday € 5 milyan. Siyaabo cusub oo loo soo saaro tamar
Costa Rica waxay soo saartaa ku dhowaad 100% tamar dib loo cusboonaysiin karo sanadkii labaad oo isku xigta.
Waxaan falanqeyneynaa xaaladda hadda jirta ee wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karo ee Costa Rica, ilaha ay tamarta ka timaado iyo waxa mustaqbalkiisu noqon doono
Layrarka cadceedda sabaynaysa, xal u helida boos la’aanta
Japan iyo Kuuriyada Koofureed ayaa hogaaminaya isticmaalka kaydadka si loogu rakibo baalal sawir qaade ah si loo siiyo kumanaan muwaadiniin ah
Warshadaha qoraxda aduunka
Waxaan falanqeyneynaa xaaladda ay hadda ku sugan tahay warshadaha qorraxda ee adduunka, kuwaas oo ah halyeeyaasheeda ugu waaweyn, iyo horumarkooda sannadaha soo socda.
Awoodda dabaysha adduunka
Waxaan falanqeyneynaa xaaladda hadda jirta ee tamarta dabaysha adduunka, kuwaas oo ah halyeeyaasheeda ugu muhiimsan, iyo isbeddelkeeda sannadihii la soo dhaafay.
Fujisawa waa magaaladii ugu horreysay ee waarta oo isku filan
Magaaladan iskufilan waxay ku taalaa Fujisawa. Waa xaafad ballaadhan oo leh qiyaastii kun guryo is-iskiis ah.
Cuba waxay dhiseysaa 59 jardiinooyin qoraxda si ay u dhaliso tamar nadiif ah
Cuba waxay dhiseysaa 59 jardiinooyin cadceedda ah waxayna dooneysaa inay ku biirto ujeedada laga leeyahay in 24% laga helo koronto nadiifinta sannadka 2030.
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee qaboojiyaha: Tamarta hawada
Wax kasta oo la xiriira tamarta hawada. Waa maxay tamarta aerothermal, sidee u shaqeysaa, halkee lagu isticmaalaa, faa'iidooyinka ay na siiso iyo wax qabadkeeda.
Iceland waxay ka qodayaan ceel-biyoodka dhulka hoostiisa ugu qoto dheer bartamaha volcano
Iceland waxay ka qodayaan ceelkan biyo-dhuleedka a volcano-dhererkiisu yahay 5-kilomitir waana sababtaas tan ugu qoto dheer adduunka.
Biomass kululeeyayaasha iyo muranka dheelitirka CO2
Mawduucan waxaan ka hadli doonnaa kuleyliyaha kaladuwan ee biomass-ka iyo muranka isku-dheelitirka CO2 ee ku jira tamarta biomass.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato tamar-abuurka ama tamarta noolaha
Tamarta ka timaadda noolaha noolaha ama tamar -leyda ayaa ka aqoon yar loona adeegsadaa noocyada kale ee tamarta la cusboonaysiin karo. Qoraalkan waxaan ku ogaan doonnaa wax walba oo iyada ku saabsan.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato tamarta dhulka
Wax kasta oo la xiriira tamar-dhuleedka. Laga soo bilaabo waxa ay tahay, sida ay u shaqeyso iyo faa'iidooyinkeeda iyo khasaaradeeda adduunka tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Shiinaha ayaa sii waday inuu jebiyo dhammaan diiwaanada tamarta dib loo cusboonaysiin karo sanadkii 2016
Shiinaha ayaa ganacsi sameynaya wuxuuna raadinayaa sida ugu dhaqsaha badan ee looga gudbo dhuxusha loona beddelo tamar nadiif ah, oo ay ku jiraan jabinta rikoorrada adduunka
Suurtagal ma tahay in jasiirad la siiyo oo keliya tamarta la cusboonaysiin karo?
Jasiiradaha Canary waxaan ka helnay El Hierro, oo ah jasiirad awood u leh inay isu keento ku dhowaad ama gebi ahaanba keliya tamarta la cusboonaysiin karo.
Shiinaha Ayaa Ansixiyay Qorshaha Tamarta Cusboonaysiinta ee Bilyanka Dollar ah
Shiinaha ayaa ku dhawaaqay qorshe malaayiin dollar ah oo lagu horumarinayo cilmi baarista tamarta la cusboonaysiin karo iyo horumarka dalka oo dhan.
Waxaad ka dhigi kartaa biyo la cabi karo tamarta qoraxda
Muddo sanado ah, shaqo ayaa laga qabtay hagaajinta farsamooyinka looga dhigayo biyaha inay cabaan. Biyaha malaga dhigi karaa cabitaan tamarta qorraxda?
Costa Rica waxay ku shaqeysay tamar dib loo cusboonaysiin karo muddo 250 maalmood ah sanadkii 2016
Costa Rica waxay ku faani kartaa in muddo 250 maalmood ah sanadka 2016 ay u weecisay isticmaalkeeda korantada ilo dib loo cusboonaysiin karo. Guul
Wuxuu ansaxiyaa mooshin lagu dhiirrigelinayo tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Spain
Fadhiga Golaha Wakiilada ayaa shalay ansixiyay mooshin lagu dhiirrigelinayo kala-guurka tamarta ee Spain oo loogu talagalay tamarta la cusboonaysiin karo.
Komishanka Yurub wuxuu ujeedkiisu yahay inuu beddelo muuqaalka tamarta
Guddiga Yurub waxay soo bandhigeen soo jeedin ah in la beddelo sharciga ku saabsan tamarta la cusboonaysiin karo iyo is-isticmaalka.
Cirifka Waqooyiga ayaa 20 isC ka sareeya heerkulkiisa caadiga ah taariikhahan
Isbedelka Cimilada ayaa sameynaya sanadkan iyo kii ugu dambeeyay, waqtigan, heerkulku aad ayuu u kordhayaa waxa ay ahayd inay noqdaan
Haraaga dhirta Cananaaska oo badal u ah saliida
Mid ka mid ah waxyaabaha lagu beddeli karo saliidda ay heleen ganacsatadu waxay noqon kartaa geedka cananaaska. Cananaaska ma badali karaa saliida?
Soo deji alwaax waara si loo buuxiyo bartilmaameedyada dib loo cusboonaysiin karo ee Midowga Yurub
Midowga Yurub. Ujeeddooyinka loo dejiyey jiilka tamarta la cusboonaysiin karo ee biomass sannadka 2030 iyo qoryaha waa in la keenaa si tan loo gaaro.
Gaaska dabiiciga ah Fenosa wuxuu qorsheynayaa inuu maalgashi ku sameeyo tamarta dabaysha ee jasiiradaha Canary
Waxay ku saabsan tahay maalgelinta 100 milyan oo euro inta udhaxeysa Gran Canaria iyo Fuerteventura si loo dhiso wadarta 13 beerood oo dabaysha ah.
Adduun la siinayo tamar dib loo cusboonaysiin karo, suurtagal ma tahay?
Adduun ku shaqeeya tamarta la cusboonaysiin karo oo keliya ayaa ku habboon in lala dagaallamo saamaynta isbeddelka cimilada iyo hagaajinta xaaladaha meeraha.
Tamarta kuleylka kuleylka ah waxay soo saartay ku dhowaad 4% dhammaan tamarta la dalbado xagaaga
Tamarta kuleylka kuleylka ayaa ku guuleysatay inay daboosho ku dhowaad 4% dhammaan baahida korantada ee Spain xagaagii, sida laga soo xigtay xogta laga helay Protermosolar.
Dib u cusbooneysiinta ayaa mar hore dhaaftay dhuxusha sida ilaha tamarta adduunka
Tamarta la cusboonaysiin karo waxay ka kooban tahay in ka badan kala badh tabarucaadka tamarta ee sannadlaha ah, oo ka bata baahida iyo isticmaalka dhuxusha.
Mid ka mid ah guryaha ugu waxtarka badan adduunka ayaa laga dhisay Ibiza
Mid ka mid ah guryaha ugu waxtarka badan adduunka ayaa lagu soo bandhigay Ibiza shir ku saabsan waxtarka tamarta oo ay soo saartay Terravita.
Ilaha suurtogalka ah ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee dhulka hoose ee magaalooyinka
Waad ka faa'iideysan kartaa qulqulka hawada ee godadka dhulka hoostiisa mara iyo lugoyta dadka lugaynaya si aad u dhaliso tamarta dabaysha.
Khamri-cabbitaankii ugu horreeyay adduunka iskiis loogu keenay dib-u-cusboonaysiinta Rioja
Waxay isticmaashaa tamarta dabaysha oo ay soo saarto dabaysha. Korontada ay soo saarto waa labanlaab loo baahan yahay si ay u shaqeyso.
Ka faa'iideysiga masiibooyinka cimilada, marawaxadaha dabaysha ee duufaannada
Awoodda baaxadda leh ee ay duufaantan kuleylaha ahi bixiyaan waxaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo tamar iyadoo ay ugu wacan tahay marawaxadaha dabaysha gaarka ah ee la hindisay.
Ku rakibida qorraxda ballaaran beer riyaha ku taal jasiiradaha Canary
Beer ku taal Betancuria (Fuerteventura) ayaa isticmaalay tamar kaliya oo laga soo saaray warshad qorraxda iskeed u bixisa dhowr toddobaad.
Cusboonaysiinta ayaa ka sii fiicnaanaya oo ka sii fiicnaanaysa, laakiin waa inay ku sameeyaan heer sare
Kheyraadka Tamarta Adduunka ee 2016, oo shalay lagu soo bandhigay Istanbul, ayaa muujinaya in koritaanka sare ee suuqa tamarta la cusboonaysiin karo ee 15-kii sano ee la soo dhaafay.
Qeybta la cusbooneysiin karo waxaa saameyn weyn ku leh maalgelin yar laakiin mashaariicda qaar waxay ku helaan mahadnaqooda cusub.
Waa xaqiiqo ay sameysay beer hormood ah Australia. Tiknoolajiyadda lagu fulinayo waxaa soo saartay shirkadda Aalborg CSP ee laga leeyahay dalka Denmark.
Unugyada cadceedda cusub ayaa hagaajiya waxtarka tamarta ee dhismayaasha
Khubaro reer yurub ah ayaa soo saaray unugyo cusub oo sawir qaade dabiici ah oo hagaajiya waxtarka tamarta ee dhismayaasha.
Extremadura waa bulshada iskeed u shaqeysa oo tamarta ugu badan ku daboola dib u cusboonaysiinta
Extremadura waxay noqotay Bulshada Iskeed u Maamusha Isbaanishka oo daboosha tamarta korantada ugu badan iyadoo ay ugu wacan tahay tamarta qoraxda.
Haweenku waxay dhisaan shoololololoji dabiici ah Nicaragua
Ujeeddada laga leeyahay tani waa in la yareeyo saameynta wasakhda ee ay soo saaraan shidaalka qashinku iyo iyadoo lala socdo, sidoo kale la dhimo kharashyada ku baxa guryahooda.
Shirkadaha dhismaha ee u heelan deegaanka
Shirkadaha u heellan dhismaha ee Isbaanishka, waxaan ka helnay qaar ka mid ah oo u heellan bay'adda.
Afar ka mid ah lixda nooc ee daanyeer ee waaweyn ayaa hadda halis ugu jira baabi'inta
Gorilla bari waxay hadda ku qoran tahay liiska cas ee afarta ka mid ah lixda nooc ee ugu waaweyn ee ugxan-weynaha.
Joogtaynta iyo u wareejinta tamarta Jarmalka
Kala guurka tamarta ee Jarmalka wuxuu ku saleysan yahay horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo iyo kordhinta iyo waxtarka ilaha tamarta ee hadda jira.
Isbahaysiga PP iyo Muwaadiniinta: Tirtiridda Canshuurta Qorraxda
Heshiiska ay wada gaareen labada hogaamiye ee maalgashiga Rajoy wuxuu tixgelinayaa ciribtirka Canshuuraha Sun ee lagu ansixiyay Go'aanka Boqortooyada ee 2015.
Thanks to la cusboonaysiin karo Andalusia waxay badbaadisay malaayiin euro
Redeja waxay u suura gelisay Maamulka Andalus inay keydiyaan in kabadan 5,3 milyan oo euro sanadkii isticmaalka tamarta.
Warbixin ayaa la soo bandhigay oo ku saabsan dhismaha warshad biomass ah oo laga dhisayo Huesca
Shirkadda Forestalia waxay ku talo jirtaa inay ka dhisto warshad biomass Monzón, oo ku taal Huesca. Warbixinta ayaa lagu lafa guray saamaynta tayada hawada.
Jarmalku wuxuu maamulaa inuu soo saaro tamar dib loo cusboonaysiin karo si uu ugu dhawaado gebi ahaanba u daboosho baahida tamarta
Jarmalku wuxuu maamulaa inuu soo saaro tamar dib loo cusboonaysiin karo si uu ugu dhowaado u daboolo baahida tamarta, 90%. Wadar dhan 55 gigawatts ayaa la soo saaray.
Shirkadda korantada ee E.on ayaa ku khasaartay 3.000 oo milyan oo yuuro maalgelin la’aan tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Shirkadda korantada ee E.on ayaa ku khasaartay 3.000 oo milyan oo yuuro maalgashiga tamarta la cusboonaysiin karo. Hadda waxaad haysaa qaab cusub oo isbeddelaya.
Tixgeli tamarta la cusboonaysiin karo ee Spain mustaqbalka
Waxyaabaha dib loo cusboonaysiin karo ayaa lagu xadgudbay Isbaanishka hadana waa inaan ka faa'iideysanaa dhismaha Dowlada cusub si aan u tixgalino dhinacyada muhiimka ah.
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo (sidoo kale loo yaqaan nadiif) waa dhammaan tamarta aan keenin gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ama ...
Tesla wuxuu ugu dambeyn iibsadaa SolarCity, ku biiritaanka cusboonaysiinta ayaa dhalatay
Elon Musk, oo ah bilyaneerka milkiilaha Tesla, wuxuu ugu dambeyn go’aansaday inuu ku iibsado shirkadda SolarCity lacag dhan 2.600 bilyan oo doolar.
Mashruuca SALSA: gawaarida korontada ku shub tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Kaydinta Tamarta Albufera, oo ah shirkad u heellan tamarta iyo baytariyada, ayaa abuureysa mashruuca SALSA si ay ugu dalacdo gawaarida korontada tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Achim Steiner: Spain waxay hormuud u noqon laheyd tamarta la cusbooneysiin karo haddii aysan ahayn xiisadda dhaqaale
Sida laga soo xigtay Achim Steiner, agaasimihii hore ee fulinta ee UNEP, Spain waxay hormuud u noqon lahayd tamarta la cusboonaysiin karo ee adduunka oo dhan haddii aysan dhibaatada jirin.
Isbaanishku had iyo jeer waxay qaadaan talaabo dhanka tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Sannadahaas oo dhan, halka inta kale ee Midowga Yurub iyo adduunku ay horumar ka sameeyeen teknoolojiyadda dib loo cusboonaysiin karo, Isbaanishku waxay sameysay taa lidkeeda.
Cyclalg, mashruuc yurubiyan ah oo loogu talagalay abuurista biorefinery leh algae
Cyclalg waa mashruuca sii wada wajiga uu ka tagay mashruucii hore ee Energreen, ujeedadiisuna tahay abuuritaanka biodiesel iyada oo loo marayo microalgae.
El Hierro waxay jabineysaa rikoorkeeda isticmaalka tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Jasiiradda El Hierro waxay maamushaa inay sii joogto 55 saacadood oo xiriir ah iyada oo siineysa kaliya tamar la cusboonaysiin karo. Meelaha laga helo waa dabayl iyo biyo.
Barcelona waxay u abuuri doontaa shirkad ganacsi tamarta la cusboonaysiin karo
Barcelona waxay abuuri doontaa hay'ad ay ku iibsan doonto kuna iibin doonto tamar dib loo cusboonaysiin karo oo laga soo saaray dhismayaasha gaarka loo leeyahay ama kuwa dadweynaha sannadka 2019.
Jasiiradda ugu horreysa ee ku taal badda Mediterranean-ka oo la bixiyo oo keliya tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Tilos, oo ah jasiirad ku taal badda Mediterranean-ka, ayaa ah tii ugu horreysay ee la keeno oo keliya tamarta la cusboonaysiin karo iyada oo ay ugu wacan tahay mashruuca "Horizonte Tilos"
Dhismo la deggan yahay oo ku yaal Madrid ayaa leh rakibaadda ugu weyn ee biyo-dhuleedka Spain
Dhisme la degan yahay oo laga dhisay Madrid ayaa leh rakibaadda ugu weyn ee la cusboonaysiin karo ee tamarta dhuleedka ee Spain si loo kordhiyo waxtarka.
Warshaddii ugu horraysay ee warshadeed ee beero-warshadaha ee Andalusia
The Sociedad Agroenergía Campillos SL. waxay ka bilaabantaa warshaddii ugu horraysay ee warshadeed ee beero-warshadaha ee Andalusia oo soo saari doonta tamarta cagaaran iyo compost.
Laba walaalo ah oo ka socda Kerala ayaa abuuraya marawaxad dabaysha oo jaban oo kacaan ka samayn doonta suuqa
Laba walaalo ah oo ka soo jeeda Kerala, oo ah gobol ka mid ah Hindiya, ayaa doonaya inay suuqa kula beddelaan marawaxaddan soo saarta koronto ku filan guri
Taadka tamarta, mustaqbalka tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Iyagoo wajahaya yaraanta kheyraadka dabiiciga iyo dalabaadka cusub ee cimilada, tamarta hirarka ayaa maanta matalaya ...
Unugyada Cadceedda Transvolter Photovoltaic
Laga soo bilaabo 2011 iyo muuqaalka warbaahinta ee WYSIPS, waxaan maqalnaa unugyo cadceeda ku shaqeeya oo hufan oo loogu talagalay codsiyo badan, dhalaalka qorraxda, ...
Awoodda qoraxda ayaa xukumi karta dib-u-cusboonaysiinta sannadka 2030-ka
Marka la eego tamarta nadiifka ah, tamarta qorraxda, si loo waxyeeleeyo horumar aad u dhakhso badan muddo 5 sano ah, ayaa sii socota ...
99% korantada Costa Rica waxay ka timaadaa dib u cusboonaysiinta
Costa Rica waxay gaartey 99% korantada laga helo tamarta dib loo cusboonaysiin karo sanadkaan 2015. Guul weyn oo lagu daro mida Urugay.
Rawlemon, qorraxda qorraxda oo ka awood badan alwaaxda sawir qaadayaasha
Ka dib dhowr sano oo horumarineed, aruuriyaha qoraxda Rawlemon wuxuu bilaabayaa meheraddiisa ganacsi. Waxaa abuuray naqshadeeye Jarmal ah, waa kubbad hufan oo ay ka buuxaan biyo awood u leh inay u beddelaan 70% tamar ka badan taarikada qorraxda caadiga ah.
Photovoltaics waxay xisaabtami doontaa 10% jiilka adduunka marka la gaaro 2030
Shalay magaalada Madrid ANPIER waxay qabatay Shirka Caalamiga ah ee II halkaasoo xog aad u xiiso badan laga helay jiilka adduunka ee sawir qaadista sanadka 2030
400 jeer ka tamar badan baallayaasha cadceedda soo jireenka ah ee soo saara biibiilaha qorraxda
Baalayaasha qorraxdaani waxay noqon karaan kuwo kiciya isbeddel weyn oo la xiriira tamarta qorraxda ee meeraha oo dhan.
SolarCity waxay ku dhawaaqeysaa laydhadhka qoraxda ugu waxtarka badan adduunka
SolarCity waxay ku dhawaaqday 3 maalmood ka hor baalayaasha qoraxda oo leh waxtarka ugu sareeya ee xilligan leh boqolkiiba 22.
Ilaa 2000, oo ahayd meeshii ugu horreysay ee adduunka laga dhaliyo dabaysha
Ilaa 2000 waxay ahayd beertii ugu horreysay ee adduunka laga dhaliyo dabaysha 1981 markii loo dhisay inay awood u yeelato xeebta Baasifigga ee Mareykanka.
Cusbooneysiinta waxay soo saartaa 32,5% tamarta Jarmalka qeybtii hore ee sanadka
Bartamihii sanadka, awoodda tamarta ee ay soo saaraan dib-u-cusboonaysiinta ayaa gaartay 32% Jarmalka, taasoo muujineysa xiisaha ay u leedahay tamar nadiif ah.
Sweden oo laba jibaartay wax soo saarka qoraxda
Ilaa 34% ayaa ah tirada waxtarka qorraxda ee soo hagaagtay, iyada oo labanlaabaysa baalayaasha cadceedda caadiga ah
Tasmania waxay eegaysaa 100% mustaqbal cagaaran oo dib loo cusboonaysiin karo
Tasmania waxay leedahay awood weyn oo dib loogu cusboonaysiin karo cagaaran waana ogyihiin tan waxayna rabaan inay sida ugu badan uga faa'iidaystaan
Tamarta cadceedda oo ay soo ururiyaan shiraacyada markabku
Shirkad Faransiis ah ayaa soo saartay unugyo sawir qaade ah oo lagu rakibay shiraacyada markabka isla markaana awood u leh inay bixiso 1 kW.
Saxaraha waa gobollada ugu wanaagsan ee lagu rakibo xoogga tamarta qoraxda
Koox saynisyahanno ah waxay u arkaan lamadegaanka inay yihiin meelaha ugu habboon ee ay ku yaalliin dhirta tamarta qorraxda (CNP)
Goob gawaarida la dhigto oo leh qorraxda qorraxda waa fikrad aad u fiican
Waxa jira tiro baabuurta la dhigto oo ku yaal magaalada oo haddii kuwan ay daboolaan saqafyada qorraxda waxay leeyihiin faa'iidooyin badan
Ilaa iyo 45 milyan oo tan oo ah CO2 ayaa badbaadin kara beero dabayl casri ah
Waxay keydisaa ilaa 45 milyan oo tan oo ah CO2, oo ah qaddar u dhigma CO2 oo uu nuugay keyn 1286 km2 ah muddo 25 sano ah
'Dhirta Dabaysha', marawaxadaha dabaysha cusub oo u eg geed oo si deggan u dhaliya awood
Dhirta Dabayshu waa marawaxado dabaysha gebi ahaanba aamusan oo leh qaab geed ku habboon jawiga magaalooyinka
Marawaxadaha dabaysha aan laheyn ee Propellerless waxay la yimaadaan mashruuca Vortex
Marawaxadaha Vortex propellerless ayaa noqon kara mid ka mid ah tiknoolajiyada ugu muhiimsan ee dib loo cusbooneysiin karo ee la bilaabay sanadkan iyo kuwii la soo dhaafay
Wareysi lala yeeshay guuleystayaasha tartanka Siemens Spain Power Matrix Challenge
Arbacadii la soo dhaafay abaalmarinta abaalmarinta 'Siemenes Power Matrix Challenge' waxaa lagu abaalmariyay mashruuca matrixka ugu wanaagsan ee waara
Israa'iil 'geedaha qorraxda' sida isha korontada iyo Wi-Fi
'Geedaha cadceedda' si loo siiyo koronto iyo Wi-Fi jardiinooyinka. Soo jeedinta cusub ee shirkad Israel laga leeyahay
PlanetSolar, doon ayaa ku shaqeysa 100% tamarta qoraxda
PlanetSolar adduunka oo dhan kuma wareegin wax aan ka ahayn tamarta cadceedda 100%
E1, matoor koronto-dhaliye ku shaqeeya shidaal la'aan
Tamarta Alphabet waxay naqshadeysay koronto-dhaliye aan isticmaalin shidaalka, laakiin taa beddelkeeda waxay isticmaashaa kuleylka qashinka mashiinnada warshadaha
Dabaylku waxay ka horreysaa tamarta shidaalka ku jirta ee dalalka Waqooyiga Yurub
Tusaale adduunka oo dhan waxa dalalka Waqooyiga Yurub ay ku sameeyaan cusboonaysiinta
Qoyska Rockefeller waxay maalgashadooda uga wareejinayaan shidaalka qashinka una cusboonaysiin karaan
Qoyska Rockefeller waxaa ka go'an nadiifinta iyo dib u cusboonaysiinta tamarta iyagoo ku daadinaya hantidooda shidaalka qashinka
Tamarta daadka waa in wali si sax ah loo adeegsadaa, maadaama il aan la koobi karin laga helo badaha
Baarayaasha Jaamacadda Sheffield, ee Boqortooyada Ingiriiska, waxay soo saareen unugyo sawir qaade ah oo loo adeegsan karo sida rinjiga aerosol.
Saddex meelood meel tamarta Jarmalku cuno waxay ka timaaddaa tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Jarmalku wuxuu markale jabiyey dhamaan saadaalihii isagoo gaarey boqolkiiba 75 baahida loo qabo tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Tamarta qoraxda ayaa xoog ku yeelatay Australia
Meelaha fogfog sida gobolka Queensland, tamarta qorraxda waxay u noqoneysaa xaqiiqo dadka deggan
Tamarta badaha waxay ka timaadaa awooda, tamarta, kuleylka iyo tamarta kiimikada biyaha badda, taas oo loo isticmaali karo in lagu soo saaro koronto, tamar kuleyl ama biyo la cabbo.
Xirmooyinka iskudhafka iskudhafka ah, kacaanka cusub
Maqaalka xiisaha leh ee ku saabsan iskudhafka qoraxda qoraxda oo ay soo saareen koox cilmi baaris ah oo ka socota Jaamacadda Stanford
Ireland inay siiso tamarta dabaysha Boqortooyada Midowday (UK)
Maqaal xiiso leh oo aan ku soo bandhigeyno oo aan ku qiimeyneyno mashruuca ay kala saxiixdeen Ireland iyo Boqortooyada Midowday ee kan dambe si ay uga helaan tamarta dabaysha tii hore
Sidee loo sameeyaa tamarta dabaysha ee guriga lagu sameeyo?
Fiidiyow xiiso leh oo aan ku baranno sida loo sameeyo tamarta dabaysha ee gurigeenna iyada oo loo marayo hab fudud oo fudud oo qiimo jaban ah
Soo hel Xirfadda Jaamacadda ee Tamarta Cusboonaysiinta
Maqaal xiiso leh oo ku saabsan xirfadda jirta ee Jaamacadda Ingiriiska ee ku saabsan tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Dhisida Warshad Dabaysha (I)
Maqaal xiiso leh oo ku saabsan dhismaha warshadda dabaysha ee guriga lagu sameeyo.
Daaweynta biyaha wasaqda ah iyadoo la adeegsanayo tamarta qoraxda
Maqaal xiiso leh oo ku saabsan mashruuca lagu horumarinayo Jaamacadda Almería ee daaweynta biyaha wasakhda ah.
Tamarta dhulka hoosteedu waxay keydisaa 70% isticmaalka tamarta guryaha qoys keliya ku nool
Maqaalka xiisaha leh ee ku saabsan dib-u-habeynta lagu soo saaray guri hal qoys ah oo ku guuleystay 70% keydinta tamarta iyada oo ay ugu wacan tahay tamar-dhuleedka.
Ma tahay magaalo si buuxda looga helo tamar dib loo cusboonaysiin karo?
Maqaalka xiisaha leh ee aan dhigno ugana jawaabno qayb ahaan su'aasha ah Ma magaalo si buuxda loo siiyaa tamar dib loo cusboonaysiin karo?
Awoodda dabaysha si ay biyaha hawada uga saaraan
Maqaalka xiisaha leh ee ku saabsan soo saarista cusub ee Eole Water, oo matoorkeeda dabayluhu u beddeli doono biyaha isku dhafan ee jawiga ku jira biyo la cabi karo.
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay caawisaa yareynta wasakheynta
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ayaa u adeegaysa yareynta wasakheynta dalal kala duwan, maadaama ay tahay mid ka mid ah ujeeddooyinka waa weyn marka la tixgelinayo mashaariicda cusub ee tamarta sida
Horumarka tamarta dabaysha ee Venezuela
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay ku socotaa xawaare aad u wanaagsan Venezuela, oo ka mid ah wadamada Koonfurta Ameerika ee raba inay tamar ka hesho ilaha dabiiciga si loogu diyaar garoobo mustaqbalka
Mashruuca tamarta qoraxda ee dugsiyada miyiga
Wax yar yar oo xiiso leh mashaariicda tamarta qorraxda ayaa loo diyaariyey dugsiyada ku yaal meelaha miyiga ah. Mid ka mid ah mashaariicdan ayaa ku dhammaaday Vélez, halkaasoo ay ku yaalliin iskuulada miyiga qaarkood
Tamar muhiim ah oo dib loo cusboonaysiin karo oo ku taal beerta dabaysha Guajira
Gobolka La Guajira wuxuu nasiib u yeeshay inuu yeesho beero dabaysha shaqeeya oo shaki kuma jiro ...
Nanotechnology tamarta qoraxda
Horumarka cusub ee ku saabsan nanotechnology waxay la xiriiraan qaybta tamarta qorraxda, gaar ahaan ...
Kobaca Tamarta Cusboonaysiinta ee Poland
Sanadkii 2011, isticmaalka tamarta laga helo ilaha dib loo cusbooneysiin karo ee Poland wuxuu ahaa 8,8%, oo 56% kamid ah ay aheyd tamar ay soo saartay biomass.
Tamarta dhulka hoostiisa oo ay ugu wacan tahay fulkaanaha
Dalka Mareykanka, waxaa loogu talagalay in fulkaano aan firfircooneyn loo isticmaalo si wanaagsan, gaar ahaan waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo dhagxaanta ...
Nidaamyada Biogas ee ku saleysan saxarada doofaarka ee Argentina
Magaalada Córdoba, Argentina, saxarada doofaarka waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro tamar
Tamarta la cusboonaysiin karo waxay kordhisaa marka loo eego baahida adduunka
Waxyar in yar waddamo badan ayaa kordhinaya ilaha tamarta la cusboonaysiin karo waxayna daboolayaan boqolkiiba sare ...
Jamhuuriyadda Dominican waxay kordhisaa awooddeeda tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Bilihii la soo dhaafay, shaqo badan ayaa laga qabtay Dominican Republic si kor loogu qaado awoodda wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karo iyo ...
Tamarta kuleylka kuleylka ah waxay caawineysaa yareynta wasakheynta
In kasta oo guud ahaan dhammaan ilaha tamarta la cusboonaysiin karo ay yihiin kuwo xiiso leh si loo yareeyo wasakheynta, mid ka mid ah kuwa caawiya ...
Koonfur Afrika iyo awooddeeda tamarta qoraxda
Koonfur Afrika waxay noqon kartaa soo saare tamarta cadceeda mustaqbalka
Qalabka ceyriinka ee deegaanka
Waa muhiim in la isticmaalo alaabta ceyriinka ee bey'ada
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Campeche
Mexico gudaheeda waxaa jira meelo badan oo tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay leedahay meel doorbidid ah iyo Campeche waa ...
Acciona, doon doonta isticmaasha tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxaa loo isticmaali karaa aagag kala duwan mid ka mid ah aagagganna waa regattas. Way dhamaatay…
Peru waxay ku horumartay tamarta biomass
In muddo ah Peru waxay xiiseyneysay tamarta la cusboonaysiin karo iyo dhammaan noocyada ...
Tamarta la cusboonaysiin karo waxay gacan ka geysaneysaa la dagaallanka isbeddelka cimilada
Horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo waxay leedahay ujeedooyin kala duwan, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan shaki la'aan waa ...
Boqortooyada Ingiriiska iyo ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo 2030
Boqortooyada Ingiriiska iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Xayeysiinta dariiqa leh tamarta dabaysha
Boorarka xayeysiinta iyadoo la isticmaalayo tamarta dabaysha
Mashruuca dabaysha ee Sucre ayaa la diyaariyay
Aagga Sucre ee Venezuela mashruuc aad u xiiso badan oo tamarta dabaysha ah ayaa lagu baranayaa, a ...
Mashruuca xiisaha leh ee tamarta dabaysha ee Kansas
Shirkadda BP waxay qorsheyneysaa inay mashruuc xiiso leh oo ku saabsan tamarta qorraxda ka fuliso magaalada Kansas ee dalka Mareykanka, a ...
Uruguay waxay rajeyneysaa inay hesho 50% tamarteeda dib loo cusboonaysiin karo
Uruguay, talaabooyin aad muhiim u ah ayaa la qaadayaa si loo hubiyo in tamarta la cusboonaysiin karo ay sii socoto koritaanka, ilaa heer ay ...
Coca Cola ayaa u isticmaali doonta tamarta cadceeda warshaddeeda ku taal Koonfur Afrika
Coca Cola ayaa u isticmaali doonta tamarta cadceeda warshad ku taal Koonfur Afrika
Biyo yar yar oo saameyn ku leh deegaanka
Khamriga Mahou wuxuu iibsan doonaa tamarta cagaaran
Gawaarida golf-ka ee ku shaqeeya qoraxda
Gawaarida golf-ka ee cadceeda ku shaqeeya
Saameynta tamarta dabaysha ay ku leedahay dhulka
Meelo kala duwan oo Isbaanish ah iyo meelo kale oo adduunka ka mid ah waxaad ku arki kartaa muuqaallo muuqaal ah oo aad ku arki karto ...
Awoodda dabaysha ee guriga
Waa suurtagal in lagu isticmaalo tamarta dabaysha guriga
Wadamada iibiya oo iibiya korontada
Waxaa jira dalal iibsada kuwa kalena iibiya tamarta
Awoodda dabayshu waxay ka caawisaa la dagaallanka isbeddelka cimilada
Tamarta dabaysha ayaa maanta loo qiimeeyaa sida ay mudan tahay, maadaama ay tahay nooc ka mid ah tamarta ...
Baytariyada baabiin kara
Baytariyada baaba'aya ayaa fursad u noqon doona sanadaha soo socda
Guryaha cagaaran ayaa ka qiimo badan suuqa guryaha
Guryaha cagaaran waa maalgashi weyn oo guryaha lagu sameeyo
Tecnosfera, waa dhismaha ugu quruxda badan adduunka
Teknoolajiyada waa dhisme jawi-saaxiibtinimo ku leh Dubai
Kaydadka aagagga kulaylaha waxay xoojinayaan isbeddelka cimilada
Kaydadka aagagga kulaylaha waxay dhaliyaan wasakheyn
Baddu waxay siisaa ilo kala duwan oo leh awood weyn oo wax soo saar tamar: hawo, hirar, hirar, kala duwanaanshaha heerkulka iyo milix uruurinta, waa xaalado leh teknoolojiyad ku habboon oo badda iyo baddaba u rogi karta ilaha waaweyn ee tamarta la cusboonaysiin karo.
Nestlé waxay isticmaashaa tamarta qoraxda si ay u sameyso jalaato
Warshada jalaatada ee Nestle waxay rakibtay nidaam tamarta qoraxda
Midabada qoraxda midabaysan
Waxaa la soo bandhigay moodel cusub oo midabyo qoraxda midab leh leh
Dhar ay ka samaysan yihiin baallayaasha cadceedda soo saara tamarta
Tiknoolajiyada cadceedda ee dharka ayaa ka mid ah mashaariicda ugu hal abuurka badan xagga tamarta nadiifka ah
Mexico iyo warshaddeeda cusub ee koronto dhalisa
Warshad cusub oo wadaag ah oo leh biomass tamarta Mexico ayaa ballanqaaday inay soo saari doonto tamar nadiif ah si ay u joojiso iyadoo ku tiirsan shidaalka
Qabow Qoraxeed: Qolalka qoraxda waxay soo saaraan qaboojinta qaboojiyaha
Waa suurtagal in qabow laga helo baararka qoraxda si ay ugu shaqeeyaan qaboojiyeyaasha qaab deegaan: yaraynta isticmaalka tamarta iyo qiiqa CO2.
Iftiiminta waddada cadceedda ee ugu horreysa ku shaqeysa ee dalka Argentina
Nalalka ugu horreeya ee qorraxda ku ifiya waddan Argentina
Wadooyinku waxay abuuri karaan tamar firfircoon
Injineerka Ingriisiga ah Peter Hughes ayaa sameeyay darbiyo ka faa'iideysanaya dhaqdhaqaaqa ka dhashay gudbitaanka gawaarida si loo abuuro tamar loona bixiyo nalalka dadweynaha ilaa masaafo dhan 1,5 km.
Tamarta Piezoelectric waxay dhaqdhaqaaqa bini'aadamka u rogtaa koronto
Tamarta Piezoelectric waxay awood u leedahay inay soo saarto koronto iyada oo loo marayo cadaadiska ama isjiidjiidka ay bini aadamku ku soo saaraan agabyada qaar markaan dhaqaaqno. Qalabka waa dabiici ama synthetic.
Tamarta mowjadu waxay ka timaaddaa dhaqdhaqaaqa hirarka
Mawjadaha dhaqdhaqaaqooda waxay soo saaraan tamar dib loo cusboonaysiin karo oo loo adeegsan karo in lagu soo saaro koronto iyadoo loo marayo teknolojiyad ku habboon.
Qalabka ku shaqeeya cadceedda ayaa isbitaallada siin kara tamar
Tamarta kuleylka kuleylka ah ayaa laga weeciyay koritaanka qeybta sababo la xiriira hoos u dhaca ku yimid waaxda guryaha, sidaa darteed wax soo saarkooda waxaa lagu dalacsiiyay aagag kale sida isbitaalada ama loogu isticmaalo qaboojiyaha.
Waqtiga lacag bixinta ee maalgashiga tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Kahor intaadan sameynin wax maalgashi, mid ka mid ah su'aalaha la falanqeynayo waa waqtiga soo noqoshada maalgashiga. Inbadan
Hoteellada deegaanka: xulashada dalxiiska ee masuulka ka ah
Hoteelada cagaaran waa inay buuxiyaan shuruudaha qaarkood si ay ugu qalmaan sidan oo kale. Iyagu waa baddal lagu tababbarayo dalxiis mas'uul ah oo waara.
Guryaha bioclimatic (1). Jihada koonfureed
Guryo leh adeegsiga bey'adda si loogu hagaajiyo kheyraadka deegaanka sidii farsamo lagu keydiyo tamarta, lacagta iyo in la fuliyo dhismooyin ixtiraama deegaanka.
Sharci dejinta Awooda korantada korontada waxay xoojineysaa baahida loo qabo tamar nadiif ah oo nadiif ah (II)
Sharciga Hagaajinta Awoodda korantada ayaa noqon lahaa
Nidaamyada deegaanka dabiiciga ah iyo tamarta la cusboonaysiin karo
Tamarta la cusboonaysiin karo waxay bixisaa ilo badan oo kala duwan si loo soo saaro tamar nadiif ah
Beljamka iyo kororkeeda wax soo saarka tamarta dabaysha
Gudaha Beljamka, caqabada soo saarida wax ka badan
Marawaxadaha Subsea ee soo saara tamarta
Marawaxadaha biyaha hoostooda mara ayaa suurtogal ka dhigaya inay ka faa'iideystaan ​​mawjadaha badda si ay u soo saaraan tamar
Asalka iyo taariikhda tamarta qoraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta'
Tamarta qoraxda waa isha casriga ee isticmaalka tamarta
Kacaankii saddexaad ee warshadaha
Kacaankii saddexaad ee warshadaha wuxuu ku saleysan yahay tamar dib loo cusboonaysiin karo
Seweed si loo sameeyo caag
Nidaamka Algaeventure (AVS), waa mid ka mid ah kuwa badan
Shirkadaha Tamarta Cusboonaysiinta ee Isbaanishka, qaybta II
Waxay ka timaaddaa qaybta I ENERCO RENOVABLES
Baaskiil koronto loogu talagalay dadka waayeelka ah
Shirkadda Panasonic waxay baaskiillada korontada ku iibisaa waayeelka
Biodigesters ee baadiyaha Argentina
Biodigesters ayaa marba marka ka sii dambeysa loo adeegsanayaa beeraha Argentine
Awooda koronto ee Yurub
Yurub waa gobolka adduunka ugu awoodda badan
Tamarta qorraxda oo lagu rakibo saqafka mise dhulka?
Tamarta qorraxda iyo qalabkeeda kaladuwan ee saqafka ama dhulka
CO2 iyo caafimaadka bulshada
CO2 kaliya ma bedesho cimilada laakiin sidoo kale waxay dhaawaceysaa caafimaadka dadka
Tamarta dabaysha, marawaxadaha dabaysha I
Marawaxadaha dabayshu waa nooc mashiinka dabaysha oo awood u leh
Ma jiraa tamar ku filan adduunka qof walba?
Waxaa jira tamar ku filan qof walba haddii la isticmaalo ilo dib loo cusboonaysiin karo
Ka faa'iidaysiga mas'uulka ah ilaha la cusboonaysiin karo
Ka faa'iidaysiga ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay ku yeelan kartaa cawaaqib xumo deegaanka
Saxaraha iyo awooddiisa oo ah isha tamarta
Saxaraha wuxuu leeyahay awood aad u weyn si uu u noqdo isha tamarta ugu weyn adduunka
Eucalyptus sida biomass
Eucalyptus oo ah walxo cayriin oo loogu talo galay biomass
Ilaha waaweyn ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Waxaa jira waddamo leh ilo ballaaran oo tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Nolol faa'iido leh oo tikniyoolajiyadeed soosaarka tamarta
Nolol waxtar leh oo teknoolojiyadda ilaha tamarta la cusboonaysiin karo iyo kuwa caadiga ah
Xaalufinta dhirta iyo qabashada CO2
Xaalufinta dhirta ayaa sii xumeyneysa xaaladda deegaanka iyadoo aan awoodin inay la qabsato CO2
Antarctica iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Warshadaha isgaarsiinta iyo tamarta la cusboonaysiin karo
Warshadaha isgaarsiintu waxay u baahan yihiin tamar dib loo cusboonaysiin karo si ay u sii jiraan
Korontada iyo isbadalka cimilada
Isbedelka cimiladu wuxuu saameyn ku yeelan karaa wax soo saarka tamarta koronto ee adduunka
Tamarta laga helo buufinnada hawo kulul I
Buufinnada hawo kulul waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan tamar. Hindisahaan Australiyaanka ah wuxuu ku soo saari karaa tamar buufinnada ...
Tilmaamo ku saabsan xulashada baararka qoraxda ee gurigeenna
Maaddaama kaabista iyo kabidda tamarta qorraxda ay kordhayaan, dad badan ayaa lagu dhiirrigaliyay inay iibsadaan baalayaasha ku shaqeeya cadceedda ...
Hoteelada leh tamarta qoraxda
Warshadaha hudheelku waa qayb dhaqaale oo muhiim ah maaddaama oo ay jiraan kumanaan hudheelo oo nooc kasta leh oo adduunka ah in.
Aasiya iyo tamarta la cusboonaysiin karo
Dalalka Aasiya tobanaankii sano ee la soo dhaafay waxay u xuubsiibteen kuna horumariyeen dhammaan heerarka dhaqaale iyo bulsho. Qaaradani waxay ...
Saqafka muraayadda tamarta
Waxaa lagu beeray Malaga, beer, halkaas oo ay ku leedahay saqafka muraayadda muraayadda ah, oo ah ...
Hygroelectricity, waxay tamar ka qaaddaa huurka hawada.
Dhowr cilmi baarayaal ah ayaa bilaabay daraasad ku saabsan suurtagalnimada in tamar laga soo saaro huurka hawada, ...
Umadaha suunka cadceedda ama qoraxdu u dhacdo
Wadamada kujira loolka + - 35 marka loo eego Ecuador waxaa looyaqaanaa gobolada qoraxdu ka dhacdo ...
Nanotechnology qaybta tamarta
Khubarada badan waxaa lagama maarmaan ah in isbedel lagu sameeyo qeybta tamarta kaliya laguma daro tamarta la cusboonaysiin karo laakiin ...
Dhismaha guryaha leh rakibaadda tamarta qorraxda sawir-qaade
Mararka qaarkood, kheyraadka ugu fudud uguna dabiiciga ah, waxay noqon karaan caawimaad weyn oo isugu imaan kara tamarta ...
Nopal si loo soo saaro tamar
Nopal waa dalag hodan ku ah sonkorta leh aalkolo heer sare ah sidaa darteed waxay leedahay tayo ...
Brazil iyo shidaalka
Brazil waa mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan ee Latin America sababtoo ah baaxadeeda iyo dhaqaalaheeda weyn oo ah ...
Dib-u-warshadeynta qaybaha qorraxda ama biraha
Sida badeecad kasta, baararka qoraxda sawir qaata waxay leeyihiin nolol waxtar leh oo xadidan. Wareegeeda nololeed wuxuu leeyahay celcelis ahaan ...
Keydinta tamarta iyo dib-u-warshadaynta
Wadammada oo dhan, dib-u-warshadaynta waxaa loo dallacayaa oo keliya in la yareeyo qaddarka qashinka laakiin sidoo kale in laga caawiyo ...
Tamarta qoraxda ee beeraha
Tamarta Qoraxdu waxay leedahay codsiyo badan, mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan ayaa ah adeegsiga howlaha beeraha. Tiknoolajiyadaan…
Saacadaha gacan-qabsiga ee bey'ada u fiican
Dhammaan noocyada wax soo saarka ee loogu talagalay isticmaalka maalinlaha ah waxaa lagu soo bandhigayaa suuqa waxyaabaha ku habboon bey'ada iyo ...
Awoodda dabaysha ee shaqeysa dabaysha la'aan
Tamarta dabaysha ayaa ah mid kamid ah ilaha ugu muhiimsan ee laga helo tamarta la cusboonaysiin karo waana mida soo kicisa xiisaha ugu badan ee ...
Khataraha caafimaad ee ka yimaada isticmaalka biomass
Wadamada saboolka ah ama aan horumarin, isticmaalka xaabada, haraaga dalagga, dhuxusha, iwm waa mid aad u badan. si ay u…
Kala sareynta wadamada iyo raadka deegaanka
Warbixinta WWF ee Planet Living waa warbixin la soo saaro labadii sanaba mar oo xaalada lagu falanqeeyo ...
Afrika iyo tamarta la cusboonaysiin karo
Afrika waxay leedahay 15% dadka adduunka ee ku nool dhul ballaadhan waana qaaradda ugu faqrisan ...
Pellets oo ah isha tamarta
Pellets waa badeecad laga helo alwaax, taas oo la farsameeyo si loogu beddelo granules, ...
Wax soo saarka bey'ada u fiican ayaa ku badan meelaha oo dhan laakiin waa mid ka mid ah qeybaha ...
Wadamada leh horumarka ugu badan ee tikniyoolajiyadda dib loo cusboonaysiin karo
Teknolojiyadaha iyo farsamooyinka ku saleysan tamarta la cusbooneysiin karo ayaa ku soo badanaya adduunka. Laakiin waxaa jira dalal cayiman ...
Kombiyuutarada deegaanka u fiican
Maanta adduunka waxaa ku jira malaayiin kumbuyuutar ama kumbuyuutaro wax soo saarkooda iyo isticmaalkoodu si joogto ah ayuu u korayaa sidaa darteed ...
Waaxda dalxiiska iyo tamarta la cusboonaysiin karo
Qeybta dalxiiska waxaa ka mid ah hoteello, hoteelo, qaabab gaadiid, socod iyo hawlo dabiici ah iwm. Qeybtaan waa ...
Raadinta kaarboonka iyo tamarta la cusboonaysiin karo
Raadinta kaarboonku waa aalad lagu cabbiro qiiqa gaaska lagu sii daayo ee qof, urur, ...
Dhismooyinka bey'ada iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Dhismooyinka cagaaran ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo badanaya wadamada horumaray. Waxyar ayaay yihiin ...
Tamarta biyaha wasakhda ah
Dhamaan magaalooyinka adduunka, biyaha wasaqda ahi waa dhibaato muhiim ah oo ay tahay inay la kulmaan, waana sababta ...